I-OCEANIA | RayHaber
[04 / 12 / 2019] Ukufika kwesitimela esisha ngejubane eliphezulu e-Ankara	I-06 Ankara
I-Oceania isitimela nesitimela sezindaba zekhebula
04 / 12 / 2019 Levent Elmastaş
UThales uzuze ithenda yokwandiswa kweSydney Underground kwiDolobha naseNingizimu-ntshonalanga, wasayina inkontileka yeCentral Management and Communications. Lesi sivumelwano sokwandiswa kweSystem's Central Management and Communication Systems yaseSydney [Okuningi ...]
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş
IMelbourne, inhloko-dolobha yesifundazwe saseVictoria, ehlose ukukhuphula amandla ayo angavuseleleki wamandla ngamaphesenti we-50, isebenzisa inethiwekhi yetramu yonke edolobheni ngamandla elanga. IMelbourne yidolobha lesibili ngobukhulu e-Australia. [Okuningi ...]
I-Robot Yokuqala Yokuqeqesha Yezwe Yase-Australia
05 / 01 / 2019 Levent Elmastaş
E-Australia, inkampani yezimayini yensimbi, iRio Tinto, yethule inethiwekhi esebenza ngokugcwele yezitimela ne-robot enkulu kunazo zonke emhlabeni. Inethiwekhi yesitimela eyasungulwa esifundeni sasePilbara eNtshonalanga Australia, cishe nge-800 [Okuningi ...]
Ukuthuthwa Kokuhamba Kwezimoto Ezingabanjwanga E-Australia
21 / 09 / 2018 Ray News
Isitimela sezimpahla ezingakahlelwanga simiswe eDevonport, e-Australia, ukuvimbela inhlekelele engaba khona. Ngokusho kwamaphoyisa aseTasmania, isitimela sezimpahla esingahlelwanga futhi esinganqunyelwe [Okuningi ...]
E-Australia kwalimala ukushayela isitimela i-16
22 / 01 / 2018 Ray News
Abagibeli be16 balimale ngesikhathi isitimela sisondela esiteshini saseRichmond enyakatho-ntshonalanga neSydney, e-Australia, sehluleka ukuma nokushayisa abagibeli kwashayisa izithiyo. Amaphoyisa Esifundazwe saseNew South Wales (NSW) enza isitatimende ngale ngozi [Okuningi ...]
Isitimela sokuqala se-solar emhlabeni wonke siqala
06 / 01 / 2018 Ray News
Isitimela sokuqala esisebenzisa amandla elanga siqale uhambo lwaso emugqeni wekhilomitha we3 e-Australia. Inkampani eyaziwa ngokuthi yiByron Bay Railroad Company iqale ukusebenzisa isitimela sokuqala senjini esebenza ngokugcwele emhlabeni e-Australia. Okomhlaba kuqala [Okuningi ...]
Isitimela sokuqala sezwe sokuya ngaphandle kwamakhamera
04 / 10 / 2017 Ray News
Isitimela Somhlaba Sokuqala Esingenamkhawulo we-Mechanic Starts Expeditions: Inkampani yezimayini ese-China iRio Tinto iqale ukusebenzisa isitimela esizimele sokuqala emhlabeni. Ngaphandle komkhakha wezimayini, inkampani [Okuningi ...]
I-1500 City Yongezwe ku-Application Moovit Public Transport
22 / 08 / 2017 Ray News
Ukungezwa kwe-Dayton, e-Ohio kusuka e-United States kukhomba esigabeni esibalulekile se-Moovit futhi kufakazela ukuthi ukuphela kwensiza oyidingayo zokuhamba emhlabeni wonke. [Okuningi ...]
Isitimela Esisiza Abantwana Ukuwathatha Nsuku Zonke Ukuya Esikoleni
03 / 07 / 2017 Ray News
Isitimela Esenza Izingane Zifune Ukuya Esikoleni Njalo Ekuseni: Izinto eziletha injabulo yangempela zivame ukuqhamuka ezintweni ezincane ezinjengalesi. Umdabu womphakathi wasePunmu ohlala eNtshonalanga Australia, isitimela esivela emiphongolweni [Okuningi ...]
Umuntu we-29 Olimale Ku-Tram Neloli E-Australia Lalimala
22 / 05 / 2017 Ray News
Ama-29 Persons Abalimele e-Australia: Kulimale abantu Tram kanye neloli ngenxa yokushayisana kwetrama neloli eMelbourne, e-Australia. Ingozi ngesikhathi sendawo ye-29 ezingeni eliwela ngaseMelbourne Zoo [Okuningi ...]
Umfana Omncane Oqeqeshwe Ngaphansi KwePeron
12 / 04 / 2017 Ray News
Umfana Omncane Uwele phakathi Kwesitimela Nopulatifomu: Esiteshini sesitimela saseCronulla eSydney, umfana omncane wawa phakathi kwesitimela neplatifomu. Lesi sehlakalo sikhonjiswe kumakhamera ezokuphepha mzuzwana. Ngokusho kwemininingwane etholwe emcimbini e-Australia eSydney [Okuningi ...]
E-Australia, i-40 izoxolisa ngenxa yenhlekelele yesitimela yaseGranville yangaphambili
16 / 01 / 2017 Ray News
I-Australia, i-40 yokuxolisa ngenhlekelele yesitimela yaseGranville ngonyaka owedlule: I-State of New South Wales (NSW) izoxolisa emindenini elahlekelwe ngabathandekayo babo enhlekeleleni yesitimela yaseGranville ngemuva kweminyaka eyi-40. I-18 Januwari 1977 [Okuningi ...]
I-TCDD Ibamba i-Austrian Delegation
06 / 10 / 2016 Ray News
I-TCDD Isingethe Ukuthunyelwa Kwase-Austrian: Kwabanjwa umhlangano phakathi kwe-Ankara TCDD nabamele izinkampani ezisebenza emkhakheni wesitimela e-Ankara Gar Tower Restaurant Behiç Erkin Hall. Inxusa le-Federal Republic of Austria kulo mhlangano. [Okuningi ...]
Iprojekthi Yokuqondisa Izithuthi kuya ePort Airport ku-Australia
19 / 02 / 2016 Ray News
Iphrojekthi Yokwenza Ukutholwa Kokufinyelela Isikhumulo sezindiza ePerth e-Australia: Kuzokwakhiwa ujantshi omusha ozoxhuma iForrestfield kanye nePherth Airport kwisimemezelo esisanda kwenziwa yiNhlangano Yezokuthutha yase-Western Australia. Kwenze kube lula ukufika esikhumulweni sezindiza [Okuningi ...]
Ama-Bombardier Trains afinyelele e-Australia
17 / 02 / 2016 Ray News
Izitimela ZeBombardier Zafika e-Australia: I-16, eyokuqala yezitimela ezintsha zikagesi ezikhiqizwe iBombardier for Railways yase-Australia, yafika eBrisbane, e-Australia ngoFebhuwari. Izitimela ezizosebenza eningizimu-mpumalanga yeQueensland engaphansi kwe-Australia amayunithi we-75 futhi [Okuningi ...]
I-New Metro Line eya e-Australia City Capital City, Canberra
01 / 02 / 2016 Ray News
INew Metro Line Yakhelwa iCanberra, Inhlokodolobha Yase-Australia: Kusayiniwe isivumelwano sokwakhiwa kwezakhiwo nenkampani yezinkampani ezahlukahlukene engxenyeni yokuqala yedolobha laseCanberra, inhloko-dolobha yase-Australia. Yakhelwe uhlelo olukhanyayo lukaloliwe weCanberra [Okuningi ...]
I-Sulfuric Acid Train
29 / 12 / 2015 Ray News
Kutholakale isitimela se-Sulfuric acid: E-Australia, i-200 kwathiwa iphuthumayo endaweni engamakhilomitha e-2, njengoba isitimela sezimpahla esiphethe imitha eyinkulungwane se-sulfuric acid saphazamiseka. Enyakatho-ntshonalanga yeQueensland, e-Australia [Okuningi ...]
Umzabalazo wokufa-wokufa emathrekhi womzila (Ividiyo)
12 / 08 / 2015 Ray News
Umzabalazo wokufa nokufa ezitimeleni zezitimela: Isigameko esenzeke esiteshini sesitimela e-Australia, esilethe izinhliziyo emlonyeni, sakhonjiswa kwikhamera yezokuphepha. Intombazanyana izama ukuthatha ithoyizi eliwela amathrekhi eFlemington Station [Okuningi ...]
10 / 08 / 2015 Ray News
Isiteleka Sabasebenzi BaseMelbourne's Railway Workers: Inyunyana yabasebenzi bezitimela zaseMelbourne inqume ukusiteleka izinsuku ezimbili. Ochwepheshe bathi isiteleka sezinsuku ezimbili ezitimeleni, esidlala indima enkulu ekuthuthiseni leli dolobha, singakhubazeka ukugcwala kwabantu edolobheni. ujantshi [Okuningi ...]
ISivumelwano Sokumiswa Kwemisebenzi YaseSydney
09 / 08 / 2015 Ray News
Isayinwe Isivumelwano Sokuvuselelwa Kwesimanje SaseSydney: Kusayiniwe isivumelwano esisha sokwenza isitimela sase-Australia eseningizimu. Isivumelwano esingu- $ 96 wezigidi sisayinwe phakathi kwe-UGL Uniport Rail noMnyango Wezokuhamba Aseningizimu ne-Australia. [Okuningi ...]